Daawo:-Xildhibaan ku baaqay inaan la fara-galin dastuurka Puntland – Puntland Post
Posted on May 14, 2017 May 15, 2017 by Dhiirane
Daawo:-Xildhibaan ku baaqay inaan la fara-galin dastuurka Puntland
Gudoomiye kuxigeenka guddiga arrimaha bulshada baarlamanka Puntland Xildhibaan Maxamed Axmed Jaceyl oo maanta wareysi siiyay PUNTLAND POST ayaa ka hadlay dooda maalmihii lasoo dhaafey ka taagan in la furo kordhinta tirada kuraasta baarlamanka Puntland oo ka kooban 66 mudane.
Xildhibaan Maxamed Axmed Jaceyl ayaa ku tilmaamay qaabka hadda wax u socdaan mid keenaya fowdo iyo qalalaase siyaasadeed Islamarkaana ay ka horeyso faragalin lagu sameeyo dastuurka in heshiis laga dhex sameeyo Issimada Puntland oo uu sheegay khilaaf ka dhex jira qaarkood.
Xildhibaanka ayaa uga digay Madaxda Puntland inay faragaliyaan arrimo keenaya khilaaf hor leh, wuxuuna carabka ku dhuftay in tirada baarlamanka lagu kordhin karo labo siyaabood oo mid tahay in afti dadweyne lagu kordhin karo tirada kuraasta Xildhibaanada, wuxuuna sheegay in gollaha wakiilada looga baahan yahay inay ilaaliyaan shuruucda dalka u degan.
Daawo wareysi wariye Abshir Dhiirane la yeeshay Xildhibaan Maxamed Axmed Jaceyl.
Shidaalka oo si aada kor ugu kacay Magaalada Garowe
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay ciidankii ay tababartay Dowladda Imaaraadka
Sh. Xasan Daahir Aweys oo fariin uu soo diray si kulul ugu weeraray kooxda Al-shabaab